Yese-mu-imwe karaoke player
Karaoke suite zvigadzirwa
Nzira yekugadzirisa sei danho rezwi mukuita?
ne admin pane 21-10-20
Stage kurira kuchaita yakakosha basa mukuimba zvesimba, zvesimba zvesimba, uye zviitiko. Kuti uvandudze mhedzisiro yemitambo yemuchadenga, zvakakosha kuti uongorore uye udzidze hukama pakati pehunyanzvi hwekukonzeresa kugadzirisa hunhu uye mhedzisiro mukuita, kuitira kuisa ...
Zvinhu zvakati wandei zvinokanganisa mhando yemusangano mamhanzi zvigadzirwa
Nekufambira mberi kwenguva, makambani ave nemusangano wemavhidhiyo zvirinani. Kana iwe uchida kubudirira kuita musangano wega wega, mhando yemusangano mamodhiyo edhizaini inonyanya kukosha. Saka ndezvipi zvinhu zvinokanganisa mhando yemusangano odhiyo michina? ? Teerera kune ...
Pfungwa dzeKuchenjerera mukugadzirisa kweStage Professional Audio
ne admin pane 21-10-12
Basa rekugadzirisa dambudziko reinjiniya inonzwisisika inoda kurapwa nehunhu uye hunhu. Mushure mekuona chete kuti dhizaini, kuvaka, sisitimu dhizaini uye mashandiro eiyo padanho michina yekurira inonyatsonzwisiswa ndipo panogona kuve nemhedzisiro yekugadzirisa mhedzisiro. Nezve general debuggi ...
yakazara-renji mutauri zvinoreva
Mutauri-wenzira mbiri ane ma speaker maviri, subwoofer uye tweeter. Iyo subwoofer uye tweeter zvakaparadzaniswa necrossover uye zvakabatana neiyo subwoofer uye tweeter zvichiteerana. Kufananidza Unyanzvi hweMutsetse Array Vatauri neMagetsi Amplifiers Mune ehunyanzvi odhiyo masystem, chete anonzwisisika uye akarurama ma ...
Ndeapi matanho ekuchengetedza kana uchishandisa vatauri vemusangano?
ne admin pane 21-09-30
Kuzivikanwa kwemusangano odhiyo kunounza kurerukirwa kubasa revanhu, uye nekuda kwezvakanaka zvaro, vanhu vanoishandisa zvakanyanya uye kazhinji. Nekuti iyo frequency yekushandisa nyanzvi yemusangano masipika mukamuri yemusangano yakanyanya kwazvo, kuitira kuti vatauri vemusangano ha ...
Ndeipi tekinoroji yedanho kurira?
Zvemitambo yemukati yemitambo yakadai sematanho emitambo, chinodiwa chekutanga inyanzvi yehunyanzvi. Chekutanga pane zvese, mhando yekurira inofanirwa kuvimbiswa. Inofanira kunge ichifadza nzeve uye yakanaka toni. Kunze kwekunze kwemitambo yemitambo. Chinhu chekutanga chinodikanwa tekinoroji. Muchiitiko ...
madiki matambudziko muimba yemitambo
Mazhinji emitambo edzimba anowanzo kufuratira zvimwe zvinhu zvavasina hanya nazvo, senge nzira yekufambisa mitsara, zvipi zvinhu zvinodiwa pakuvhara ruzha, uye chakanyanya kukosha kugadzira denga rizere nenyeredzi. Dzimwe mhuri sedzimwe dzinopenya meteor yekunaka, izvo zviri chaizvo goo ...
Dhiyabhorosi Dhizaini Dhizaini
1.Purojekisheni chinzvimbo Chinonyanya kukosha cheimba dhizaini dhizaini kusarudza inonzwisisika nzvimbo yekuratidzira. Mushure mekusimbisa nzvimbo yekuratidzira yemukamuri, sezvo kushongedzwa kwemba yemitambo kuchisarudzwa, saizi yeprojekti inofanirwa kuve inosvika zana inches. Zvinoenderana neiyo ratio ye1 ...
Simba gudzazwi rekutenga hunyanzvi [GAEpro odhiyo]
ne admin pane 21-09-15
Kubatana neyedu flagship odhiyo gudzazwi-MB akateedzana, mhedzisiro mhedzisiro inogona kuratidzwa zvakanyatsonaka. Ndeapi akazara-renji odhiyo uye matatu-nzira odhiyo? 1. Iyo frequency renji yakasiyana: Yakazara-frequency, sezita zvarinoreva, inoreva kune yakawandisa frequency renji uye kufukidzwa kwakakura. Iyo yapfuura f ...
Simba gudzazwi rekutenga hunyanzvi
Paunenge uchisarudza gudzazwi remagetsi, unofanirwa kutanga watarisa kune mamwe maratidziro ehunyanzvi. kusimbisa anti-kupindira abilit ...
Ndeipi yakanakisa kamuri saizi yeimba yemitambo?
Chii chakakura saimba ine maonero akanaka eiyo imba yemitambo? Iwe unofanirwa kuziva kuti iyo inonzwisisika kuita kweanobudirira imba theatre dhizaini kurira uye mufananidzo mhedzisiro; kuti kurira kwakanaka here kana kuti kwete kunoenderana nekuenderana, kugadzirisa, uye nzvimbo zvinhu zvemidziyo, mu additi ...
Chii chinobva kuDolby Atmos yeimba yemitambo
Dolby Atmos inzvimbo yepamusoro yepamusoro yakatenderedzwa neDolby Laboratories muna 2012. Inoshandiswa mumitambo yemavhidhiyo. Nokubatanidza kumberi, padivi, kumashure uye mudenga maspika neakaomesesa odhiyo yekugadzirisa uye algorithms, inopa inosvika makumi matanhatu nematanhatu nzira dzekutenderedza ruzha, ichiwedzera pfungwa yenzvimbo ini ...
ktv odhiyo-ndeipi mhando iri nani?
Mazuva ano, sezvo nguva yekuzorora yevechidiki ichiwanda, vanhu vazhinji voda kuvhura nzvimbo dzakawandisa. Asi ruzha rune ruzha rwemhando yepamusoro runounza huwandu hukuru hwevatengi ku ktv, nekuti munhu wese anofanirwa kuve neunyanzvi pakusarudza ktv odhiyo kodhi. Saka, chii mutengo ...
Ini ndinofanira kumisikidza yekuwedzera KTV odhiyo kana ndiine imba yemitambo?
Nekuvandudzwa kwehupenyu hwehupenyu, vanhu vazhinji vakaisa dzimba dzemitambo, uye dzimba dzezororo dzakakomberedza dzimwe nzvimbo dzinoyevedza dzakagadzirirwawo yakazara seti yemitambo, KTV odhiyo, mitambo yemabhodhi uye zvimwe zvekuvaraidza. Saka maitiro ekugadzira wega wega imba yemitambo odhiyo, kana uchida mu ...
Kuongorora kwemhando dzakasiyana dzePVC epurasitiki zvidimbu
Sechinhu chakakurumbira chemakemikari pamusika, vagadziri vazhinji vakaita ongororo yekugadzira paPVC epurasitiki. Mushure memakore ekutsvagisa kwekugadzira, PVC mapurasitiki zvimedu zvinogona kutooneka pamusika nenzira dzakasiyana siyana, izvo zvinokwanisa kuzadzisa zvido zvakasiyana zvevamwe vashandisi. Nhasi ...
PVC zvidimbu zvakare iri mhando yemapurasitiki. Mapepa epurasitiki anoreva mapurasitiki ane granular, ayo anowanzo kuve akapatsanurwa kuita anopfuura mazana maviri emhando uye zviuru zvemhando zvakapatsanurwa. PVC zvidimbu zvinoreva granular mapurasitiki akagadzirwa pvc! PVC ipolyvinyl chloride plastiki ine yakajeka ruvara ...
Yakajairwa tsika kuisirwa yeimba theatre system
Iyo yemba yemitambo yemitambo ine zvirevo zviviri: General kududzirwa kweakakomberedza ruzha gudzazwi yeimba yemitambo uye gadziriso yakajairika yemubatanidzwa mutauri system yeimba yemitambo. Mushure mekuitwa kwematanho maviri aya, zvinoratidza kupera kwemamiriro ezvinhu ekuti pakange pasina ...
Izvo zvinodikanwa here kushandisa arc skrini mune yemitambo theatre?
Izvo zvinodikanwa here kushandisa yakakomberedzwa skrini mune yeimba theatre? Yakakombama skrini ine zvakawanda zvakanaka. Semuenzaniso, iwo mufananidzo wakakombama unenge uchienderana nemamiriro eziso, vhudzi rinenge rakasununguka kupfuura ndiro yakatsetseka, uye mufananidzo unenge uine simba zvakanyanya kana uchiona mafirimu e3D. Pasi peiyo circu ...
Imba yemitambo odhiyo yakadzamidzirwa
Iye zvino, vanhu vazhinji uye vazhinji vanowanzoisa dzimba dzemitambo mumba. Nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemararamiro ehupenyu hwevanhu, zvinodiwa nevanhu zvehunhu hwehupenyu zviri kuramba zvichikwira uye zvichikwira. Shamwari zhinji ikozvino dzinovaka imba yemitambo mumba mavo, kuitira kuti mhuri yavo ...
Ndezvipi zvinhu zvakanakira imba yemitambo kurira kwekushongedza kwekushongedza
Kune chirevo muindasitiri yekuteerera, "Tamba nemidziyo pakutanga, tamba newaya uye dhizaini nefivha." Zvinogona kuonekwa kuti dhizaini yakakosha kwazvo mukushongedzwa kwemitambo yemumba mudzimba, uye kurira kwekugadzira dhizaini kwakwezva kutariswa kwevakawanda ...
Inogona imba yemitambo ingashandiswa neKTV?
Mune echinyakare maindasitiri, yako yemunhu maitiro ichave ari makuru ekushandisa. “Munzanga yazvino, hapana kushomeka kwevanhu vane chinzvimbo chepamusoro vanonakirwa nevasoni vega, vechidiki vane mukurumbira, uye vatungamiriri vemaindasitiri vane chirevo chakasimba mutsika. Chinese vatengi ndivo ...
Imba yemitambo dhizaini uye nzira dzekushongedza
Kutanga, ngatitarisei pazvinhu zvekucherechedza: 1. Teerera kune saizi yekamuri Chekutanga pane zvese, teerera kune saizi yekamuri. Kechipiri, zvakakosha kutarisa iko kwekudzivirira inzwi, kupinza ruzha uye kupatsanurwa kwemhedzisiro yemidziyo mumba yemitambo. 2 Kufananidza kwe ...
Ndeapi madhisheni anoda kutarisirwa paunenge uchivaka yakanakisa firimu uye terevhizheni horo system
Iyo yepamusoro firimu uye terevhizheni horo system haisi chete mhedzisiro yemubatanidzwa mhedzisiro yeaudio-yekuona michina, asi zvakare zvine hukama zvakanyanya neako ekushongedza dhizaini. Kana yako yekushongedza dhizaini dhizaini ikabatwa nemazvo, inosimudzira mhedzisiro yeimba yako odhiyo-yekuona imba kune izere ...
Wakambobata here taboos mukushandisa odhiyo mufirimu uye terevhizheni horo?
Nekufarirwa kwemidziyo yekuteerera mumafirimu nemahoro eterevhizheni uye nekuwedzera kwevashandisi vemafirimu neterevhizheni dzimba, akawanda ekumusoro-soro michina akabudirira kupinda muhupenyu hwevashandisi mumafirimu neterevhizheni dzimba. Audio, semidziyo mikuru, chikamu chakakosha cheiyo firimu uye tel ...
Matambudziko madiki akajairika anotarisana nawo mukuvaka odhiyo-yekuona system
TV iri mumba yekutandarira ichiri kudikanwa here? Munguva yeInternet nhare, kunyangwe vabereki vakatanga kunyepa pasofa nekuona mavhidhiyo nenhau panharembozha yavo, uye TV yakadzimwa kwenguva refu. Imba yekutandarira haigoni kuve isina basa kana. Izvo zvinodikanwa kuti Joule atarise zvakasiyana ...
Chii chandinofanira kuita kana imba odhiyo-yekuona system ichingobata ruzha asi isinganzwikwe?
Imba odhiyo-inoonekwa system: kazhinji teerera kune anotevera mashanu mapoinzi ekudzivirira inzwi uye kupinza ruzha. 1. Ruzha rweye audiovisual system inogona kuzadzikiswa munzira dzakawanda: Chekutanga, zvine musoro sarudzo yezvinhu zvinotora ruzha. Asi zvakare teerera kune zvinonzwika-zvinonzwika zvinhu ...
Ungasarudza sei gudzazwi remagetsi e-odhiyo-yekuona system?
Yakazara odhiyo-yekuona sisitimu inosanganisira akawanda anobatsira maseketi nemidziyo, senge odhiyo, sosi sosi, gudzazwi yemagetsi, CD player, nezvimwe. Iyo ruzha system ichave nebasa rekuratidzwa kweye audiovisual system mhedzisiro kubva kune chiratidzo chiratidzo kune simba gudzazwi. , kubva pasimba ...
Maitiro ekuvandudza iwo mhando yekutamba ruzha mune yako movie theatre
Sezvo isu tese tichiziva, iyo acoustic nharaunda yeiyo firimu uye terevhizheni horo ine simba rakakura kwazvo pane yekutamba mhedzisiro yeiyo odhiyo sisitimu kupfuura chero chero imwe yekuteerera michina. Kunyangwe paine nzira dzakawanda dzekuvandudza nharaunda inonzwika, kuwanda kugadziriswa kweiyo firimu uye terevhizheni studio icha ma ...
Audiovisual system Nzira yekusarudza
Natsiridza yekutamba yemhando yepamusoro
Sezvo isu tese tichiziva, iyo acoustic nharaunda yeiyo firimu uye terevhizheni horo ine simba rakakura kwazvo pamhedzisiro yeiyo ruzha system kupfuura chero imwe yemidziyo yekuteerera. Kunyangwe paine nzira dzakawanda dzekuvandudza nharaunda inonzwika, kuwanda kugadziriswa kweiyo firimu uye terevhizheni studio ichagadzira zvinhu ...
Iyo yega cinema inofanirwa kuiswa mumadziro kana kuisa ruzha kunze?
Iyo yega cinema inopinda mumadziro kana kuisa stereo panze? Chinhu ichi chinoratidzika kunge chiri nyore kwazvo. —— Pamwe kuiisa yakanangana kunze senge yechinyakare Hi-Fi, kana kuiisa yakananga mukati memadziro, batanidza nemadziro, kana kutozviisa yakanangana kuseri kwechidzitiro ine odhiyo skrini. Chaizvoizvo th ...
Imba yekutandarira TV ichiri kudikanwa here? Munguva yeInternet nhare, kunyangwe vabereki vakatanga kunyepa pasofa nekuona mavhidhiyo nenhau mumafoni avo, uye TV yakadzimwa kwenguva refu. Imba yekutandarira haigoni kuve isina basa kana. Izvo zvinodikanwa kuti pano neapo uone zvakasiyana zvinoratidza ...
Kwayaka: Internet Wedzera Nguva: 2020-11-05 Dzvanya: Yakazara odhiyo-yekuona sisitimu inosanganisira akawanda ekubatsira maseketi nemidziyo, senge odhiyo, chiratidzo sosi, gudzazwi remagetsi, CD inoridza, nezvimwe. yeiyo audiovisual system mhedzisiro kubva kuchiratidzo saka ...
Izvo zvinodikanwa here kushandisa acoustic kurapwa zvinhu?
Tevere, isu tinokurukura iyo acoustic kurapwa mune yakasarudzika vhidhiyo kamuri. Parizvino, mazhinji echinyakare-akagadzirwa odhiyo-ekuona emakamuri dhizaini kumba uye kunze kwenyika vanoshandisa acoustic kurapwa kune yakakura kana diki padanho, kunyanya kusanganisira kurira kwezwi uye kupararira. Ehezve, mimwe mhinduro yepamusoro inoshandisa zvakare yakavhenganiswa acoust ...
Kupinda-chikamu chega chega yemitambo yekumisikidza zano, iwe unofanirwa kuziva zvishoma
Kana iyo post-90s yasiya Coke wotora ma thermos, kana iyo post-80s ichishuvira kugadzikana uye kugeza mudenderedzwa reshamwari, iwe unofanirwa kugomera mashiripiti enguva. Uye muhupenyu hwemhuri hwazvino, zvinhu zvipi zvitsva zvakakwezva kutariswa kwevanhu vese? Icho chinofanirwa kuve icho chitsva chaunofarira chega chega th ...
Zvakanyatsonaka here kuva wega bhaisikopo mune yepasi?
1. Chinhu chakanyanya kukosha chekufunga kudonhedza kwepasi. Chinhu chekutanga chekuita ndechekunyatso tarisa nzvimbo yese yekudonha. Dzimba itsva dzepasi kazhinji dzinodonha zvirinani, asi dzimba dzepasi dzekare dzinowanzo tenderera. Mvura inodonha inokanganisa masvingo zvishoma nezvishoma uye nekukuvadza michina. Iyi ndiyo ...
Iko kuumbwa kwepamusoro yakavanzika sinema system
Chii chinosanganisira chepamusoro chakavanzika sinema chinosanganisira, kuisirwa kwepamusoro yakavanzika sinema system uye yepamusoro yakavanzika sinema, maitiro ekuzviita izvi, rega Zhongle Bianxiao ikusume kwauri. Iko kuumbwa kwepamusoro yakavanzika yemitambo system (ndezvipi zvirimo zvinosanganisirwa kumusoro kwepachivande theatre), heino zvimwe ...
Inoshanda zano rekumisikidza imba yemitambo
Kana hupfumi hwemagariro hukapinda padanho rekusimudzira nekukurumidza, mhuri dzemumadhorobha dzinowedzera kuda kuona mafirimu kumba, ayo anogona kudzivirira kuwandisa kwemotokari muguta mukupera kwevhiki uye anogona kunakidzwa nekusununguka nguva yemhuri neyevana. Naizvozvo, kumisikidza firimu neterevhizheni h ...
Imhandoi yeimba inokodzera kushongedza uye dhizaini imba yemitambo?
Vanhu vazhinji vane shungu nemabhaisikopo nemumhanzi vanoda kuisa yavo yakavanzika theatre kumba kuitira kuti vanzwe mufaro wemamuvhi nemumhanzi chero nguva. Nekudaro, kune mumwe mubvunzo unonetsa munhu wese, ndiko kuti, rudzii rwekamuri rwakakodzera kune yakavanzika yemitambo. Kunyangwe vanhu vazhinji ...
Yakavanzika yemitambo yekushongedza dhizaini, iwo masitayiti ndiyo yako dhishi
Mazuva ano, kumisikidzwa kweavo masheatre kwave kuita, uye vakawanda uye vanofarira epamhepo-vanoona vanoda kutanga kuiteerera, vachitarisira kuvaka imba yemitambo yakasarudzika iyo inogona kunyatsobatanidza yavo yekushongedza imba masitayera. Nekuti munhu wese maitiro ekushongedza ...
Kusanzwisisana kwakati wandei muAcoustic Kurapa kwePachivande Kumba Imba
Iye zvino hatifanire kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekutengesa kuti tione mafirimu, nekuti kugadziridza, kuisa, uye kuvaka kwenzvimbo dzemitambo dzakazvimirira dzega dzave sarudzo yevaridzi vazhinji. Inonyaradza mamiriro ekuona epamba uye anovhundutsa odhiyo-yekuona mhedzisiro ine b ...
Ndeapi matipi ekutenga purojekita
Chekutanga pane zvese, saizi yenzvimbo Sarudzo yeprojekita inofanirwa kubva pahukuru hwenzvimbo. Kana yakaiswa muimba yekutandarira, nzvimbo yekutandarira inofanirwa kunge yakakura zvakakwana. Kazhinji, nzvimbo yekutandarira inofanirwa kuve inopfuura makumi maviri emamirimita, kana zvisina kudaro, kana nzvimbo yacho iri diki kwazvo, usadaro ...
Maitiro ekutonga ruzha system yeimba yemitambo?
Kwayaka: Internet Wedzera Nguva: 2020-11-10 Dzvanya: Kune akawanda epachivande sinema odhiyo odhiyo pamusika, uye bhizinesi rega rega rinotenda kuti ravo rakanakisa. Semuridzi uyo anoda kuvaka yakavanzika cinema, akatarisana nemhando dzakawanda, zvakaoma kutaura izvo zvinodiwa. Panguva ino, iri im ...
Nzira yekuenzanisa sei maspika uye zvinowedzera zveakavanzika cinema system?
Ivo vari muindasitiri vanoziva kuti zvinoitika zveyakavanzika cinema system mhedzisiro yekubatana kwekuita kwemidziyo. Naizvozvo, vega vanofarira mabhaisikopo vachabhadhara zvakanyanya kusanganiswa kwemidziyo kana uchimisikidza yakavanzika cinema. Mushure mezvose, yakavanzika yemitambo haisi yekutenga ...
Nzira yekuvandudza mamiriro ekuona eiyo imba yemitambo system?
Kana isu tine chivimbo chekugadzira yega yekutandarira imba yekutandarira yemitambo yemhuri yedu, yakashata imba yekutandarira nhanho yemba yekutandarira michina yekuteerera yakatengwa kubva kuhupfumi yakaita kuti iwe utadze kutanga, uye iwe unotanga kunetseka neicho unoita sei? Bian Xiao akakuudza ...
Chii chaunofanira kusarudza ye HD Karaoke VOD muchina? Ndeipi mhando yakanaka
Iine kufukidzwa kwepasirese kwetekinoroji uye tekinoroji yedhijitari, zvinowanda-uye zvepamusoro-tsananguro smart zvigadzirwa zvemagetsi, senge yepamusoro-tsananguro karaoke karaoke michina, yakakwira-tsananguro yedhijitari TV, uye yakakwira-tsananguro yedhijitari DV, zvabuda muhupenyu. Yakakwira-tsananguro yemhando yepamusoro uye kurira qu ...
Sarudzo yekaraoke karaoke muchina
Karaoke karaoke muchina unonyanya kufarirwa karaoke muchina muChina. Iyo yakakamurwa kuita maviri marudzi: yakamira-yega vhezheni uye online vhezheni. Iyo yekumira-yega vhezheni yakakodzera kumakamuri emusangano mayuniti emakamuri uye dzimwe nzvimbo, uye iyo network vhezheni inokodzera hombe-mikuru KTV kushandiswa. Kunyanya kusuma ...
Professional Karaoke Player - Nei Uchifanira Kudzidza Karaoke
Kuti uve mutambi wenyanzvi wekaraoke, uchafanirwa kunge uine maikorofoni, mamwe machira emimhanzi, bhuku rinotaura nezvemimhanzi nenziyo, uye chakanyanya kukosha pane zvese, unoda muchina wekaraoke. Karaoke michina inowanikwa zvirinyore kutenga kubva kune mazhinji karaoke zvitoro. Unogona kusarudza kuti si ...
Ruzivo rudiki nezve kupatsanurwa kwemutauri
Sezvinodiwa zvehupenyu, mota dzakapinda zviuru zvemhuri muTexas. Sezvo "nzeve" dzemotokari, mota odhiyo ndiyo yekutanga sarudzo yevakawanda vanoshandura vanofarira. Kugadziriswa kunonzwisisika kwemotokari odhiyo hakungogadzirise chete kurira kwemota yako, asi zvakare kunatsiridza kutyaira kwako. Ini ...
Magudzanzwi anowanzozivikanwa sehwamanda. Zvichitaurwa zviri nyore, iwo emagetsi-acoustic michina inogona kushandura masaini emagetsi kuita ruzha. Iwo akakosha michina mune odhiyo masystem. Seimwe ye electroacoustic transducers iyo inoshandura simba remagetsi kuita simba rezwi, mhando uye charac ...
Zvimiro zvekaraoke muchina
ne admin pane 21-04-08
Yakanangana nekushandisa kwemhuri, mazhinji emakara karaoke pamusika anogadzirirwa nzvimbo dzeKTV, achitadza kufunga zvinodiwa nenhengo dzemhuri. Chaizvoizvo chakanakira kushandiswa kwemhuri: zviri nyore kutakura, yakazara rwiyo raibhurari, zvakanyanya sezvinobvira kusangana nezvinodiwa zvevashandisi, saizi yacho yakakodzera ...
Mhuri Karaoke Machine
Mhuri karaoke michina inowanzoidaidzwa kuti karaoke karaoke michina. Makina ekutanga e karaoke makaseti tepi rekodhi, ayo anongonzwika chete asi asina mifananidzo. Mushure mekunge vhidhiyo rekodhi yabuda muma1970, karaoke yakagadziridzwa ikaita mifananidzo uye zvinyorwa, uye mifananidzo nemazwi zvakaratidzwa pa ...
Nakidzwa neKaraoke nekuimba Nekaraoke Machine
Kutenga karaoke system kunogona kuve mari hombe, asi kana ukatarisa mukati mayo nokungwarira, iwe uchaona kuti kune zvakawanda zvezvinhu zvinofanirwa kuve nazvo. ivo mumba mako. Izvo hazviwane chero zvirinani kupfuura izvi. Wh ...
Zvese Nezve Karaoke System
Kana wanga uchiedza kutsvaga nzira yekunakirwa nemumhanzi nekuimba panguva imwe chete, uchave unofarira kudzidza kushandisa karaoke system. Karaoke system ktv Karaoke inzira yakanaka kwazvo yekudzidza kutaura zvinobudirira uye kuzviratidza vamwe. Kana iwe ukaimba mumuchina wekaraoke, ...
Powered DJ Mutauri Maitiro - A Pfupi Nhungamiro yekutsvaga iyo Yakakodzera DJ Vatauri
Vanhu vazhinji vanoshandisa izwi rekuti "mutauri waDJ" kutsanangura gudzanzwi chero ripi zvaro rakagadzirirwa kupomha ruzha rwemhanzi kune boka revanhu pane ruzha rwakanyanya munzvimbo yeruzhinji. Yakapihwa dj mutauri Horo muhoro, imba yemuchato, uye kunyange diki zvisina kurongwa kirabhu kirabhu mienzaniso ...
Chii chinonzi Mutambi weKaraoke?
A KTV Karaoke player chishandiso chakakura kune chero munhu anotarisa kuteerera kune wavanofarira mimhanzi kana kunyange kupinda mukuimba nekuita nyika yekaraoke.ktv karaoke player Vazhinji vanhu vanoda karaoke uye kunakirwa kunoenda nayo. Kana iwe uri mumwe wevanhu ivavo uye uchida kutora kuimba kwako uye pe ...
Musiyano uripo pakati pekubata zvese-mu-mumwe muchina uye yakajairika komputa
Kutanga, kuoneka Kwakajairika makomputa, kusanganisira desktop desktop uye zvinyorwa, akajairika saizi ndeye 14.5 kusvika 22 inches; nepo iyo yekubata-skrini-ese-muchina muchina inogona kukamurwa kuita mhando zhinji, iyo-in-one muchina yakaturikwa pamadziro ndokuiswa yakananga pasi, iyo si ...
Ndeupi maindasitiri ekuratidzira ari nani?
Sarudzo yekuratidzira kwemaindasitiri haisi iyo inodhura zvirinani, asi kusarudza zvigadzirwa zvako zvichienderana nezvinodiwa uye nekukupa ruzivo rwakakodzera kwazvo. Izvi zvinotevera kutsanangura maitiro ekusarudza akanyanya akanakisa maindasitiri kuratidza kubva pakuona kwehuremu hwehupenyu, kutonhora ...
Chii Chaunotarisa MuKaraoke Machine
Wakambonzwa nezve chero karaoke KTV masystem? Izvi ndezve kungori iko kwekupedzisira kuwedzera kune ese iwo mavara ezvikwata anoita zvekuvaraidza epamba.ktv system karaoke muchina Mumashoko akareruka, iyo Karaoke KTV system iTV seti iyo yakashandurwa kuita seKaraoke muchina. Sezvingaite ...
Dzidza Kuimba Karaoke - Zvaunoda Kuti Ufunge
Tsananguro: An American online online music application yakatanga kuvhurwa pasi pezita rekuti Karaoke muna 2021 uyezve nemidziyo yeIOS muna 2021. kuimba karaoke Chirongwa ichi chakatanga kutarira pakudzidza tsika dzekuJapan dzekuimba senge nzira dzekufema, matauriro ezwi, kudoma, diction uye matauriro. Muna l ...
Mumhanzi weKaraoke unogadzirwa nemitinhimira inoiswa kuimba dzichaimbwa nevateereri. Mumhanzi weKaraoke wakasiyana nemamwe marudzi emumhanzi nekuti unowanzoimbwa uchiridza. Izvi zvinopa karaoke yekuwedzera kubata kwekuzvibata, izvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza kuteerera. karaoke masisitimu uko iyo ...
Kusarudza Cordless Microphone System
Cordless Microphone Systems iri kuramba ichifarirwa nevaimbi nevamwe vanofarira mimhanzi. Hapasisina chikonzero chekushushikana nezve tambo dzinobatanidza zvidimbu zvakasiyana zvemidziyo pamwe chete, kana kunetseka pamusoro pesingawirirane mahedhifoni kana nzeve. Iyo isina tambo maikorofoni system inochinjika ...
Zviitiko zvekufunga nezvazvo Paunenge uchitenga Karaoke System Microphone
Kana iwe uri mumusika weiyo nyowani karaoke system, iwe uchazoda kutarisa izvo zviripo sarudzo yemakrofoni futi. Karaoke system maikorofoni Hunhu hweruzha rwako hunonyanya kukosha paunenge uchiimba uye zvakakosha kuti iwe Iva nemidziyo chaiyo kuitira kuti iwe ugone kuimba ...
Inotakurika Karaoke Machine Mashini
Kana iwe uchizoshandisa inotakurika karaoke muchina, pamwe nekuti urikuda kutora kuimba kune inotevera nhanho. Iwe unoziva zvinoshungurudza sei kana mumwe munhu akabata zvakanyanya kana kuyedza kuseka kana kunyanya kukosha, ivo vasingatomboimba zvachose. Inotakurika karaoke michina inokutendera iwe kuimba sezvauri ...
Ungatenga sei maikorofoni isina waya? Ndedzipi nzira dzekutenga isina maikorofoni isina waya
Maikorofoni anotengeswa mumusika anonyanya kukamurwa muzvikamu zviviri zvinoenderana nemusoro wekutora: imwe maikorofoni ine simba, inonyanya kuzivikanwa nehunhu hwakanaka uye haidi magetsi. imwe maikorofoni inodzikamisa, inozivikanwa nekugara kwenguva refu. Mhoro...
Maitiro ekugadzirisa maikorofoni mune smart musangano kamuri
Iyo maikorofoni yemusangano inoita kunge iri yakapusa munhu, asi haisi. Iyo ine simba odhiyo-inoonekwa sisitimu inoumbwa nemhando dzakasiyana dzefuma michina. Chete kana musangano wemusangano ukamisikidzwa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevatengi ndipo panogona kuita musangano wemusangano kuitisa mukana wayo ...
Ndinofanira Kutenga Iyo Nyowani Karaoke Machine?
Kune akawanda marudzi eakaraoke masisitimu epamba pamusika.karaoke muchina system Mamwe acho ari nyore odhiyo masystem ayo anotendera iwe kuimba mukati mamaikorofoni, uyezve mutauri acharidza zvakare kuzwi rako. Zvimwe zvizere nekombuta interface iyo inobvumidza iwe kuridza maturu edhiyo ...
Kuwana A Karaoke Machine With Songs To Sing
Kana iwe uri kufunga nezve kumisikidza karaoke muchina kumba, iwe unofanirwa kutora zvishoma zvinhu mukufunga. Kana iwe uchida kukwanisa kuimba pamwe chete nedzaunofarira nziyo uye vanhu vazere newe, saka iwe unofanirwa kuenda kunze. Tora iyo yakanakisa karaoke muchina nenziyo dzaunofarira uye iyo p ...
Ramangwana kuvandudza kwevasina waya masipika
Inofungidzirwa kuti kubva muna 2021 kusvika muna 2026, misika yepasi rese isina waya yekutaura ichakura padanho rekukura pagore rinopfuura gumi nemana kubva muzana. Musika wepasi rese wemutauri wemutauri (wakavengwa nemari) uchawana kukura kwakazara kwe150% panguva yekufungidzira. Pakati penguva 2021-2026, marke ...
Mutauri foni mutauri isina mvura mhinduro
Nekuvandudzwa kwema smart phone, nharembozha dzave chinhu chakakosha muhupenyu hwedu. Izvo hazvisi chete zvinoshandiswa sekutaurirana maturusi, asiwo varaidzo, kubhadhara, uye vibrato. Inogona kutiunzira nyore. Nekudaro, kana nharembozha isina basa risingapinde mvura, uye netsaona ...
Basa uye zvakanakira nekuipira kweaudio simba gudzazwi
ne admin pane 21-01-26
Iyo yakasanganiswa odhiyo simba gudzazwi inonzi seyakagadzwa kubudirira. Basa reiyo inosanganisa gudzazwi ndeyekusimudzira simba rechiratidzo chemagetsi chisina kusimba chakatumirwa nedunhu repamberi, uye kugadzira yakakura yakakwana yazvino kutyaira mutauri kuti apedze shanduko yemagetsi-acoustic ....
Chiziviso chipfupi chemazwi ekuwedzera
Iwo odhiyo gudzazwi chishandiso chinogadzira zvakare yekuisa odhiyo chiratidzo pane inoburitsa chinhu chinogadzira ruzha. Iyo yakagadziriswazve chiratidzo vhoriyamu uye nhanho yemagetsi inofanirwa kuve yakanaka-ichokwadi, inoshanda uye yakadzika kusarurama. Iyo odhiyo renji ingangoita 20Hz kusvika 20000Hz, saka gudzazwi inofanirwa kuve neakanaka ...
Karaoke muchina sumo
Iyo karaoke muchina yakakamurwa kuita: yakamira-yega karaoke muchina uye online karaoke muchina. Yakakamurwa nechinangwa: yekutengesa karaoke muchina, pamba karaoke muchina 1. Vanhu vanoda mimhanzi, vanofarira kuimba, uye vanoda kuve vanozivikanwa vaimbi: Mira KTV kumba, imba zvakanyanya sezvaunoda, uye uve wako ow ...
Karaoke musika wemusika musika chikero muna 2021
Iwo musika chikero cheiyo karaoke muchina indasitiri muna 2021 yakavakirwa pane hombe nhamba yekutanga-ruoko kutsvagisa uye data yekutarisa inovhara makuru maindasitiri (kusanganisira iyo goho uye goho kukosha kwechinangwa chigadzirwa kana indasitiri mukati menguva yakatarwa, nezvimwewo, zvichibva huwandu hwevanhu, zvinodiwa nevanhu, ...
Wireless maikorofoni sumo
a. Qualtz yakavharirwa modhi: Inoshandisa quartz oscillator kugadzira chaiyo uye yakagadzikana yakagadziriswa frequency yekutumira uye kugamuchira. Dunhu iri nyore uye mutengo wakaderera. Iyo ndiyo yakajairwa dunhu dhizaini yanhasi isina waya mamaikorofoni. Rudzi rwe maikorofoni uye runogamuchira runogona kungova ...
Wireless maikorofoni frequency kupatsanura
Iko kuwanda kwakawanda sei musiyano uripo pakati peV-chidimbu uye U-chidimbu cheiyo isina waya maikorofoni U-chidimbu uye V-chidimbu vanoshandisa akasiyana radio radio radio frequency frequency. Iwo ese amateur radio frequency mabhendi. Iyo UHF bhendi yakanyanya kwazvo frequency bhendi ine yepakati frequency ye145 MH ...
Makaralı gudzazwi chikumbiro
1. Makaralı gudzazwi gadziridza ine akasiyana masisitimu USB interface: flash dhisiki mhando, Mini kiyi mhando, yekupeta mhando, bhokisi. Inoshandiswa pamaWindows macomputer ane USB ports uye Macs ane Mac OS X. Semuenzaniso, Sony's PCGA-BA1, diki uye yakanaka, inorema chete 5g, chiratidzo chinoratidza pamuswe chinopenya bhuruu ...
Nhanganyaya kune bluetooth gudzazwi
Iyo bluetooth gudzazwi imhando yeasina waya network yekuparadzira tekinoroji. Panguva iyoyo, isina waya tekinoroji anga aripo kwenguva yakareba, uye vamwe vacho vakatopinda muchikamu chakakura. Semuenzaniso, infrared tekinoroji inogona kuwanikwa mune akasiyana mutengi zvigadzirwa zvemagetsi senge pamba a ...
Mazuva ano, vanhu vazhinji uye vanoshandisa vatambi vemazuva ano vekaraoke kuti vabvise kumanikidza kuri kuita basa nekudzidza hupenyu. Vamwe vanhu vari muKTV, asi vanhu vazhinji vanofarira kuimba kumba, izvo zvisiri nyore chete asi zvakare zvinoenderana nechishuwo chevanhu chekuvaraidza. mhedzisiro yekuteerera. Vatambi veKaraoke ...
Chii chinonzi gudzazwi
ne admin pane 20-09-30
Karaoke michina mukuwedzera kune masipika, michina yemimhanzi yakakosha, mhando yeagudziri pachayo yakakoshawo. Iko kushanda kweKTV kunofanira kuve kwakabatana neyako saizi size uye zvekushongedza zvinhu. Nzvimbo dzakasiyana dzemakamuri dzinofanirwa kushandisa akasiyana emagetsi amplifaya. Teerera teerera ...
Dumba redu muCanton Fair uye Hongkong Electronics Fair
Chii chinonzi karaoke？
Zita rekaraoke rinobva mumazwi echiJapan "zvisina maturo" uye "orchestra". Zvichienderana nezviri muchirevo, karaoke inogona kureva mhando yenzvimbo yekuvaraidza, kuimba kuimba yekudzokera shure, uye chishandiso chekuburitsa kumashure kumashure. Hazvina mhosva mamiriro ezvinhu, isu tinogara tichifungidzira maikorofoni, mwenje unopenya ...
Wireless Microphone Karaoke, Airplay Mugamuchiri, Karaoke Inotakurika Microphone, Usb Cd Player Yemota,